Befotaka: nalaina tamin’ny helikoptera ny zandary iray narary - ewa.mg
News - Befotaka: nalaina tamin’ny helikoptera ny zandary iray narary
Zandary kilasy faharoa miasa ao amin’ny “poste avancé” Befotaka, borigadin’Itondy, no tratran’ny aretina mahery vaika tao an-tranony ny alin’ny 19 jolay 2019 teo ka reraka tanteraka. Raha vao nahita izany ireo namany sy ny fokonolona ao an-toerana, nandray andraikitra avy hatrany nitondra azy hamonjy tobim-pahasalamana ao Ankavandra. Ora dimy be izao ny nandehanana nitondra azy teny amin’ny tobim-pahasalamana. Tsy vita tao anefa ny fitsaboana azy ka voatery nakarina aty an-dRenivohitra tamin’ny alalan’ny helikoptera izy. Noho ny fielezan’ny tobin’ny zandarimariam-pirenena any amin’ny toerana lavitra sy saro-dalana manerana ny Nosy, maro ireo zandary misedra olana vokatry ny fitokana-monina sy ny tsy fisian’ny lalana. Ny asabotsy teo, tonga teto an-dRenivohitra ny helikoptera naka azy ka ny mpandrindra ankapobeny ny asa stratejika eo anivon’ny Seg, ny Jly Rabehajasoa Andrianarivo, sy ny lefitra voalohan’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Randriamanesy André, no nitsena azy. Naneho fisaorana ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny fanomezan-tanana nandefasana helikoptera nanavotana ny ain’ity zandary ity ireto tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ireto. Nohamafisin’izy ireo hatrany fa manome lanja ny fitsinjovana ny maha olona ny zandarimaria ka tsy manao ambanin-javatra ny fahasalaman’ireo zandary ary tsy maintsy mandray andraikitra avy hatrany raha vao misy tranga toy izao.
L’article Befotaka: nalaina tamin’ny helikoptera ny zandary iray narary a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa ara-miaramila: haka traikefa amin’ny Sinoa ny Tafika Malagasy
Nivoitra nandritra ny fihaonana teo amin’ny tompon’andraikitry ny fiarovan’ny masoivohon’i Sina eto Madagasikara, ny Kly Wang Tao sy ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika, ny Jly Sahivelo Monja Delphin, omaly, teny amin’ny toeram-piasany eny Andohalo ny fanamafisam-piaraha-miasa eo amin’ny Tafika Malagasy sy ny firenena sinoa amin’ny alalan’ny fanofanana ara-miaramila sy ny fampitaovana manokana ny Tafika. Voaresaka tamin’izany ny endrika hanamafisana ny fiaraha-miasa, indrindra ny fifandraisana. « Azo lazaina fa mivelatra amin’ny firenena maro ny Tafika mba ho tombontsoan’ny firenena malagasy ary mankasitraka hatrany ny firenena sinoa amin’izao ezaka goavana ataon’izy ireo amin’ny Tafika Malagasy izao ary manantena ny hitohizan’izany hatrany », hoy ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika. Nomarihin’ny Kly Wang Tao kosa fa efa nianatra nandritra ny herintaona tany Sina ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika ka isan’ny nanamora ny fifandraisana ara-tafika ka izany rahateo no anton’izao fanamafisana ny fiaraha-miasa izao.Jean ClaudeL’article Fiaraha-miasa ara-miaramila: haka traikefa amin’ny Sinoa ny Tafika Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Minisitry ny Fahasalamana Rakotovao Hanitrala:“Tsy hisy famindrampo ho an’ireo tratra manao kolikoly”
Hentitra ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka nitafa tamin’ireo tompon’andraikitra momba ny fahasalamana rehetra any amin’ny faritra. Mila manao ezaka ny rehetra hamerenana indray ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny sehatry ny fahasalamana. Nifampiresaka tamin’ireo talem-paritry ny fahasalamana (DRSP), ireo tale mitantana ny hopitaly (CHU, CHRR, CHRD…), ireo tompon’andraikitra ara-pahasalamana eny anivon’ny distrika manerana an’i Madaga­sikara, omaly, ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Ra­kotovao Hanitrala Jean Louis tamin’ny alalan’ny vi­sio­con­férence.Tanjona ny hamerina in­dray ny fitokisan’ny vahoaka ny ministera sy ny tolotra avy amin’ireny toeram-pitsaboana samihafa ireny.Nasongadiny manokana ny fampiharana ny fitsaboana manaja ny maha olona eny anivon’ireo toeram-pitsaboana rehetra manerana ny Nosy. Manomboka eny amin’ny toeram-pitsaboana fototra izany (CSB) ka hatreny amin’ny hopitaly lehibe. Fidinana ifotony tsy ampoizinaNotsindrin’ny minisitra mafy ihany koa ny ady amin’ny kolikoly, izay mampitaraina vahoaka maro ary anisan’ny antony tsy hanatonan’ny marary toeram-pitsaboana mihitsy aza izany. Hisy ny fanaraha-maso akaiky ary tsy hisy ny famindram-po ho an’ireo izay tratra manao izany. Hisy ny fidinana ifotony tsy ampoizina ataon’ ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ho fampiharana izany. Tsy ny toetra maha olona ihany no handrefesana ny fa­hombiazan’ny mpitantana fa eo koa ny lafiny fitanta­nana, handraisana fepetra avy ha­trany izay manao goragora manimba endrika ny fitantanan-draharaham-panjakana. Noresahina nandritra izao fihaonana ampitan-davitra izao ihany koa ny fanatsàrana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka, ny ady amin’ny Covid-19, mbola mitohy. Nisaotra ireo mpiara-miasa rehetra koa ny minisitra amin’ny fandraisana andrai­kitra sy ny fanarahana ny fepetra noraisin’ny fanjakana handresena ny valanaretina covid-19.Tatiana AL’article Minisitry ny Fahasalamana Rakotovao Hanitrala:“Tsy hisy famindrampo ho an’ireo tratra manao kolikoly” a été récupéré chez Newsmada.
Olona maromaro handalo fanadihadiana…: nogiazana ao amin’ny banky foibe ireo vatosoa saika haondrana antsokosoko
Tonga tao Toamasina nanatrika ny fitsirihana sy ny fijerena tsirairay ireo kaontenera valo nisy vatosoa saika haondrana antsokosoko ny tale jeneralin’ny fadintseranana, i Lainkana Zafivanona Ernest, omaly sady nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety. Raha ny fanazavany, miisa valo ireo kaontenera nahitana ireto vatosoa nokasaina haondrana antsokosoko ho any Sina ireto ka izany LHB izany ny mpandefa azy avy eto Madagasikara voasoratra ao anatin’ny taratasin’entana saika haondrana. Ireo kaontenera telo APZU 355996/4 – TEMU 060763/8 – TCLU 257694/5, efa vita fisavana no nahitana ireto vatosoa ireto. Misy ny efa vita amin’ny endriny ilàna azy, misy kosa ireo mbola tsy vita. Ireo vatosoa efa vita amin’ny endriny ilàna azy izay nentina avy hatrany ao amin’ny banky foiben’i Madagasikara sy hatao fananam-pirenena. Ireo mbola tsy vita kosa, nogiazana fa mbola mandalo laboratoara aloha ahalalana ny tena momba azy sy ny sandany.“Tsy azo ekena ny tahaka izao…”, hoy ny fadintserananaRaha ny fanazavana nomen’ny ladoany, nahitana ireny antsoina hoe “corail noir” ireny ireto vatosoa tratra ireto. Araka ny fifanarahan’ny Cites, tsy azo aondrana ireny vokatra ireny fa mahavoasazy. Teo koa ireo vatosoa lafo vidy hafa tena tadiavin’ny any ivelany toy ny safira sy ametista. Nambaran’ny tale jeneralin’ny fadintseranana fa misy olona maromaro efa mandalo fanadihadiana momba ity raharaha ity ka isan’izany ilay voasoratra amin’ny taratasin’entana saika haondrana “LHB”. Milatsaka ny sazy mifanaraka amin’izany ho an’ireo voarohirohy rehetra ao anatin’ity raharaha ity aorian’ny famotorana. “Tsy azo ekena ny toe-javatra tahaka izao satria fananam-pirenena tsy azo havaozina ireny. Raha ireny no lasa any ampitan-dranomasina nefa tsy misy vokany amin’ny firenena malagasy manondrana sy nakana azy, ho voa mafy isika”, hoy izy.Sajo/Jean ClaudeL’article Olona maromaro handalo fanadihadiana…: nogiazana ao amin’ny banky foibe ireo vatosoa saika haondrana antsokosoko a été récupéré chez Newsmada.
CNIDH momba ny zon’olombelona: « Tsy avela amin’izao ny « Raharaha Antsakabary » sy « Antanimena » »
Aiza ho aiza ny fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara? Raha ny tatitry ny CNIDH, be ny fanararaotam-pahefana. Tsy avela amin’izao fa arahi-maso akaiky ny « Raharaha Antsakabary » sy ny « Raharaha Antanimena » « Amin’ny ankapobeny, ny mahatonga ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona eto amintsika amin’izao fotoana izao: eo amin’ny hoe manitsakitsaka ny zon’ny hafa izay manana fahefana, hery, vola. » Io ny nambaran’ny filohan’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny zon’olombelona (CNIDH), Rabenoro Mireille, tamin’ny fanaovana tatitra isan-taona, teny Antaninarenina, omaly, momba ny fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara, taona 2018. Miainga hatrany amin’ny hoe hery sy fahefana tsy mitovy ny tsy fanajana ny zon’olombelona. Eo amin’ny 100 mahery eo ho eo manerana an’i Madagasikara ny fitarainana voarain’ny CNIDH amin’izao. Toa tsy manao ny asany ny fanjakana amin’izany: tokony hisy fiarovana ny rehetra momba ny zon’olombelona. Voalaza, ohatra, ny hoe mitovy avokoa ny olombelona rehetra eo anatrehan’ny lalàna. Manan-jo mitovy izany ny rehetra raha voaaron’ny lalàna. Eto amintsika anefa amin’izao fotoana izao, mampalahelo fa tsy izay no mitranga matetika. Endrika isehoan’ny tsy fanajana ny zon’olombelona izay, ohatra, ny « Raharaha Antsakabary », tsy hita izay tohiny sy farany, na efa roa taona latsaka aza (febroary 2017), nahavoarohirohy polisy ampolony. Farany teo, ny « Raharaha Antanimena » nisy fanambanana fitaovam-piadiana nataona miaramila. Tsy araka ny tokony ho izy ny hoe fanjakana tan-dalàna « Manameloka hatrany ny fakana an-keriny sy ny fitsaram-bahoaka mitranga izahay », hoy izy, momba ny fisian’ny fitsaram-bahoaka sy ny fakana an-keriny tato ho ato. Taratry ny fahalemen’ny fitondram-panjakana ireny. Tsy araka ny tokony ho izy ny hoe fanjakana tan-dalàna. Satria tsy matoky ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ny olona, ka miditra amin’ny hoe fitsaram-bahoaka. Laharam-pahamehana ny famerenana araka izay azo atao ny fanjakana tan-dalàna. Raha tsorina, Rangory fototry ny afo ny kolikoly. Raha tsy misy ny kolikoly, tsy misy ny fanararaotam-pehefana isan-karazany, ny fakana an-keriny, ny fitsaram-bahoaka. Nilaza hanamafy ny ezaka amin’ny fanatontosana iraka sy fanadihadiana ny CNIDH amin’izao fahazoany tetibola hiasana izao. Zava-dehibe izay amin’ny fitandroana ny zon’olombelona, ankoatra ny fanaovana lalàna. Saika any amin’ny faritra sy toerana lavitra fanjakana no tena misy ny fanitsakitsahana zon’olombelona. R. Nd. L’article CNIDH momba ny zon’olombelona: « Tsy avela amin’izao ny « Raharaha Antsakabary » sy « Antanimena » » a été récupéré chez Newsmada.
Tratra ambodiomby teo am-pamakiana trano ny lehilahy telo, ny sabotsy lasa teo. Nifanenjehan’ny fokonolona. Voadaroka tamin’izany ny lehilahy iray tratra teny Ambohipo. Natolotra ny pôlisy, avy eo. Teny Manakambahiny kosa no nahatrarana ny lehilahy iray faharoa. Tra-tehaka, taorian’izay, ny namany iray. Samy efa naiditra am-ponja vonjimaika izy telo lahy voalaza ireo. L’article Tratra ambodiomby est apparu en premier sur AoRaha.